April 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
April 29, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Toban nin oo lagu eedeeyay in ay kufsadeen kadibna dileen gabar yar ayaa maxkamad la soo taagi doonaa dhawaan, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Puntland. Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland, […]
April 28, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Mdaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in uu dhaliilsanyahay sida loo maareeyay soo xulista guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya. Shir jaraai’d oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada, Deni ayaa ku tilmaamay […]
April 27, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Tobankii sanno ee u dambeysay madaxda Puntland waxay caan ku ahaayeen in dad badan ay soo dhaweeyaan mar walba oo ay dalka ku soo noqonayaan. Soo dhaweyntaas ayaa ahayd in dad shacab ah […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Saddex dagaalyahan oo katirsan ISIS ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka fuliyay gudaha Puntland, sida taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay ku sheegeen bayaan maanta oo Sabti ah. Duqeynta ayaa ka dhacday […]
Garowe-(Puntland Mirror) Three ISIS fighters were killed in US airstrike in Puntland, the US Africa Command said in a statement on Saturday. The strike occurred in Golis Mountains of Bari region on Friday, according to […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. Madaxweynaha ayaa asbuucyadii dhawaa ee lasoo dhaafay safaro ku tagay dalalka Imaaraatka Carabta […]
April 26, 2019 Puntland Mirror 0
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha Puntland, Galmudug iyo Jubbaland ayaa wadahadal la yeeshay safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamamoto. Kulanka oo ka dhacay magaalada Nairobi maanta oo Jimce ah, ayaa diirada lagu saaray arrimaha ammaanka, federaalka, […]
April 25, 2019 Puntland Mirror 0
Garowe-(Puntland Mirror) Xildhibaano katirsan aqalka sare oo kasoo jeeda Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah yimid magaalada Garoowe, ee caasimada Puntland. Xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeedka safarkooda Garoowe uu yahay sidii […]
Qaraxa wadada dhinaceeda la dhigo oo lala beegsaday gaariga guddoomiyaha gobolka Bari
April 24, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Qaraxa wadada dhinaceeda la dhigo ayaa lala beegsaday gaariga guddoomiyaha gobolka Bari. Sida ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror, qaraxa ayaa saakay oo Arbaco ah lala eegtay gaariga guddoomiyaha […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal sare oo katirsanaa Al-Shabaab ayaa isku dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka. Sargaalka is dhiibay ayaa magaciisa lagu sheegay Aadan Cabdi Maxamed oo loo yaqaan “Aadan Cobe”, […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Cabdullaahi Cali Sugule, oo ah nabadoon iyo ganacsade ayaa si xun loo dhaawacay kadib markii niman hubeysan oo aan la aqoonsan ay ku weerareen meel u dhow gurigiisa magaalada Boosaaso fiidnimadii Sabtida, sida [...]